Tababar lagu baranayo khatarta gudniinka fircooniga ee gabdhaha oo Qardho lagu qabtay. – Radio Daljir
Qardjo,Dec,26 -Aqoon isweydaarsi socon doona 2 cisho ayaa maanta laga furey magaalada Qardho ee gobolka Karkaar,waxana tababarka lagu baranayaa qaabkii lagu joojin lahaa gudniinka fircooniga ee hablaha,ayna fahmaan gabdhuhu khatarta gudniinka fircooniga uu ku yeelan doono noloshooda mustaqbalka.
Aqoon isweydaarsigaan ayaa waxaa loogu tala galay in lagu wacyi galiyo gabdhaha iyo haweenka ku nool gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho ee xarunta u ah gobolka Karkaar.
C/raxman Siciid oo ah sarkaal ka tirsan ururka wadanigaa ee tababarka soo qaban qaabiyay ayaa waxa uu sheegay in habluhu ay yihiin dadka uu saameeyay gudniinka fircoonigaa ayna qaadaan fariinta tababarka ayagoo gaarsiinaya dadka kale ee aan kasoo qeyb galin tababarka.
Sahra Siciid Jaqanaf iskuduwaha wasaaradda haweenka iyo hormarinta qoyska gobolka Karkaar ayaa sheegtay in gudniinka fircoonigaa uu yahay mid ka madax banaan diinta Islaamka ee uuna ku kooban yahay dadka Somalida ah.
Sahra Siciid Jaqanaf ayaa tilmaamtay in gudniinka fircoonigaa uu deegaanada Puntland ku faafay ayadoo ugu baaqday haweenka iyo gabdhaha ka qeyb galaya tababarka inay ka digtoonaadaan khatarka gudniinka fircooniga.
Wacyigalinta bulshada ee fahanka khatarta gudniinka fircoonigaa ayaa waxa ay ka socotaa dhamaan deegaanada Puntland ayadoo tababaro ceynkaan oo kale laga fuliyay gobolada kale ee dawladda.